Letterpress - Word Game APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Letterpress - သမ်မာကမျြးဂိမ်း
Letterpress - သမ်မာကမျြးဂိမ်း APK ကို
သငျသညျ 2-player ကိုစကားလုံးဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့လျှင်သင် Letterpress ခစျြလိမျ့မညျ။
ဒါဟာ Apple ကဆုချီးမြှင့်ဆုရှင်နောက်ဆုံးတော့ Android ကိုမှရောက်လေပြီ။ Android, iPhone, iPad သို့မဟုတ် Mac ပေါ်မှာပြိုင်ဘက် Play ။ တစ်ပြိုင်နက်ထိုကိရိယာများမဆိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့အခမဲ့ကစားသမားအကောင့်ကိုဝင်ရောက်။
Letterpress ယင်း၏အလိုလိုသိပြဇာတ်များနှင့်လှပသောဒီဇိုင်းအဘို့အခစျြတျောမူသည်။ ကစားသမားဘုတ်အဖွဲ့ဖမ်းဆီးဖို့အလှည့်စာလုံးပေါင်းစကားလုံးများကိုယူပါ။ အများဆုံးရမှတ်ကိုအနိုင်ပေးနှင့်အတူကစားသမား!
•သင့်ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာ PLAY ။ အသိပေးချက်များသင့်ရဲ့အလှည့်အချက်ပြ။
•အမွဲအခမဲ့နှင့် Full-featured ။
•အခြားကစားသမားတွေနဲ့ Real-time အတွက် Chat ။
• Oxford Dictionary အင်အားကြီး Real-time စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်။
•အတော်များများပိုပြီး features တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်မရရှိနိုင်ပါ။
"Letterpress အန္တရာယ်နှင့်အတူ Boggle ၏ပျော်စရာပေါင်းစပ်။ ဒါဟာစကားလုံးဂိမ်းပရိသတ်တွေအဘို့ကြီးစွာသော Two-player ကို app ကိုဖွင့်။ "- Macworld
"ဒီ interface ကိုတိုင်းအလှည့်မှာကြည်နူးဖွယ်အပြန်အလှန်ဒြပ်စင်များနှင့်ထုပ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ " - The Next Web
"ဒါဟာလျင်မြန်စွာကို iOS အပေါ်မှာငါ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ " - MacStories
"Letterpress နေရာတိုင်းရေချိုးခန်းအတွင်းလူများ၏စိတ်နှလုံးကိုအနိုင်ရအကြှနျုပျ၏အိမျပွ screen နဲ့သေချာအပေါ်နေရာမှဝင်ငွေတစ်ဦးနာကျင်စွာစွဲလမ်းစကားလုံးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ " - iMore
"ရိုးရှင်းသောနှင့် Awesome ကို။ " - Touch ကို Arcade
အထောက်အပံ့နှင့်အဖြေကိုများအတွက်မကြာခဏမေးခွန်းများကို, http://www.letterpressapp.com/support.html ကူးခေါင်းကိုဟုမေးရန်။ တွစ်တာ @LetterpressApp အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။ Facebook မှာ http://www.facebook.com/Letterpress အပေါ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲ။ နေရာတိုင်း Play!
Letterpress Solebon LLC (http://www.solebon.com) မှာအသင်းအားဖြင့် USA တွင် built အခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။
10.24 ကို MB
အဘယ်သူသည်ကိုခပ်လို့မရပါ - ...